Shina sy Taïwan : Hatezerana vokatry ny vovo-dronono voapoizina vita avy any Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2008 11:20 GMT
Ireo vokatra vovo-dronono, novokarin'ny vondron'orinasa Sanlu （三鹿） avy any Shina, dia tsikaritra fa voapoizina tamin'ny alalan'ny melamine taorian'ny nahitàna fa zaza an-jatony no narary tratry ny vato any amin'ny voa [amin'ny teny anglisy] (calculs rénaux). Zaza iray tany amin'ny faritany sinoa ao Gansu no maty noho izany.
25 taonina tamin'ny vovo-dronono novokarin'ny vondron'orinasa Sanlu no naondrana nankany Taiwan tamin'iny volana Aogositra lasa iny, ary niteraka sahotaka be tokoa tany Taiwan ity vaovao ity.
I Sinhong [amin'ny teny Sinoa] no mitantara ny amin'ny fahataràn'ny fampilazàna ny vahoaka avy amin'ny governemanta Sinoa momba ilay vovo-dronono voapoizina
Tamin'ny volana Martsa, tao Shina, dia efa nisy siosio nandeha fa nisy zazakely maro narary vokatry n y fihinànana vovo-dronono voapoizina. Nohamafisin'ny filazàna avy amin'ny Hopitaly izany ny volana Jona, ary nanodidina io fotoana io no nanondrànana ireo vovo-dronono voapoizina ho any Taiwan.. Ny fiandohan'ny volana Aogositra, nahatsikaritra ny vondron'orinasa Sanlu fa misy melamine tany anatin'ny vovo-dronono novokarin'izy ireo. Na izany aza,, nangatak'andro lava ny amin'ny tokony hamerenana ireo vovo-dronono ny vondron'orinasa Sanlu hatramin'ny 11 septambra, ary dia nilaza tamin'ny tompon'andraikitra Taioaney (Taiwanais) ny governemanta sinoa ny 12 septambra.
Kianin'i Eric [amin'ny teny sinoa] ny tsy firaharahàn'ny governemanta taioaney (Taiwanais) sy ny fanaovany tsinontsinona ilay fampitandremana ary ny fahataràn'ny hetsika avy aminy.
Resaka saro-pady mahakasika ain'olombelona izy ity, ka tena nanohina tokoa ny Strait Exchange Foundation (海峽交流基金會) ny “fihetsika maha-te hidera” nataon'ny governemanta sinoa, raha ninia nangina kosa ny governemantantsika. Tato aoriana, nony hitan'izy ireo fa tsy voafehiny intsony ny raharaha dia nanapa-kevitra ny hampiantso fivoriana iraisan'ireo ministera isan-tsokajiny ny Praiminisitra Liu Chao-shiuan (劉兆玄) Nalemy lohalika tanteraka ny governemantantsika ary ny antony dia tsy isalasalana fa ny tahotra hoe sao simba ilay “fifandraisana sarobidy” eo amin'ny Taiwan sy Shina taorian'ilay fianianana nataon'ny Filoha Ma Ying-jeou 馬英九 tamin'ny volana May lasa iny…ary dia tena tsy hain-dry zareo akory na ny hiaro ny mpiray tanindrazana aza/p class=”translation”>
I Sinhong [amin'ny teny sinoa] koa dia namoitra fa mety ho nosarontsaronan'ny governemanta noho ny fisian'ny Lalao Olaimpika tamin'ny volana Aogositra ity olana ity.
Tsy azo saràhana amin'ny Lalao Olaimpika natao tany Beijing tamin'ny volana Aogositra ity fanarontsaronana ny resaka vovo-dronono voapoizina ity. Ny Lalao Olaimpika izay natao ny 8 hatramin'ny 24 Aogositra. Talohan'ny Lalao Olaimpika dia nanome baiko ny governemanta sinoa mba hanakànana izay fanadihadiana rehetra mety hanaratsy endrika an'i Shina. Talohan'ny Lalao Olaimpika indrindra anefa no nahatsikaritra ny fanapoizinana ry zareo tao amin'ny vondron'orinasa Sanlu, ary dia tsinjontsika avy amin'izany fa naleon'ny governemanta sinoa namela ny mpiray tanindrazana aminy ho faty mba hahafahany mitazona ny sary tsaran'i Shina. Nefa ity ezaka hanarontsarona ity dia tsy hoe mahakasika fotsiny ny ain'ireo Sinoa , fa koa loza mitatao ho an'ireo olona any amin'ny firenena hafa, tsy azo ekena velively mihitsy ny fisainana mihevitra ho masi-mandidy amin'ny ain'ny hafa toy izany!
Nanamafy ny vondron'orinasa Sanlu fa ireo melamine hita tany anatin'ny vovo-drononon'izy ireo dia ireo mpamokatra sy ireo mpaninjara no nanampoka azy ireny mba hanaraka ny fenitra momba ny azota, rehefa avy notampohany rano ny ronono mba handevonana azy. Tsy maharesy lahatra ny maro anefa io fanambaràny io.
I Eric [amin'ny teny sinoa] dia maka tsoa-kevitra avy amin'ny fomba nentina namokatra ny vovo-dronono.
Izay nampiditra ny melamine mba hampiakàrana ny tàhan'ny azota ao anaty vovo-dronono dia tokony ho olona matihanina satria ilàna fahalalàna ara-tsimika izany, noho izany tsy inoako fa hoe ny mpamokatra no nampiditra melamine tany anaty ronono
I Williamlong [amin'ny teny sinoa] koa dia naka tsoa-kevitra avy amin'ny toetoetra ara-tsimikan'ny melamine.
Tsy tena levon'ny rano tanteraka ny melamine, koa amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny mpamokatra hanampy melamine amin'ny ronono? Raha izy ireo no nanao izany, tsy maintsy hisaraka amin'ny ronono ny melamine. Noho izany, ny maharesy lahatra ahy dia ny hoe nampiana melamine avy hatrany tany amin'ny orinasa ihany ny vovo-dronono nandritra ny fikarakaràna natao taminy.
Lianyue, [amin'ny teny sinoa] izay teratany sinoa, dia niantso ny governemantany hanao ity raharaha ity ho zava-dehibe, hijery ny tena fototry ny olana, ary hamàha izany.
Raha tsy hanadihady ireo rehetra voakasik'ity ny governemanta sinoa…ny sehatry ny fandraharahàna momba ny ronono sinoa no hirodana. Isan'ireo sangany amin'ny vokatra azo avy amin'ny ronono ny vondron'orinasa Sanlu, raha nanampy singa manapoizina amin'ny vokatra arosony ry zareo, dia hataon'ny olon-drehetra anaty sobika iray ho toy ny manao izany daholo ny mpamokatra hafa rehetra eto Shina. Raha te hiaro tena ny vondron'orinasa Sanlu amin'ny filazàna fa tsiambaratelon'ity orinasa ity ny fanampiana melamine, hiara-rendrika aminy amin'ity olana ity daholo ny ankabeazan'ny orinasa sinoa mpanodina ronono…Rendrika miaraka amin'ireo koa ny orinasa sinoa mpanodina vokatra fihinana. Raha tsy matahotra ny hanapoizina zaza ny orinasa sy ny governemanta sinoa, hatraiza no fetran'izy ireo eo amin'ny seahtry ny orinasa mpanapoizina? Ireo biby fitaiza an-trano, ireo ankizy tanora, ny olon-dehibe … Ny «Made in China» dia efa tena malaza amin'ny fisian'ny akora manapoizina any anatiny. Raha ho tafavoaka amin'izao ity vondron'orinasa Sanlu ity, dia efa samia isika mivonona ny amin'izay fantsika mbola homaniny halentiny amin'ny vatam-patin'I Shina.
Nisy koa ny resaka nandeha fa notambazan'ny vondron'orinasa Sanlu ny Baidu [milina sinoa mpikaroka] mba hanivana ireo hevitra mivoy fanakianana ny orinasa, rehefa manao fikarohana amin'ny alalan'i Baidu. T4822k11b no manoratra [amin'ny teny sinoa] hoe :
Ny mpiasa tao aminy ihany no namboraka ny tetika nomanina hanarontsaronana sy hitantànana ity olan'ny vondron'orinasa Sanlu ity. Ny tetika dia ny hanomezana telo tapitrisa an'I Bandu ka hangataka ny hanivànan'ito farany ny vaovao… Ny tale misahana ny serasera ao amin'ny Baidu dia nilàza fa : “Raha ohatra ianao manao fikarohana ao amin'ny Baidu, azonao atao ny hahazo ireo tahirim-baovaon'ny lasa, ka manakiana na tsia ny vondron'orinasa Sanlu. Izay no porofo tsara indrindra”… Kanefa, taorian'ny fanamarinana, tsikaritray fa taorian'ny 12 septambra vao nanomboka nivoaka ireo vaovao manakiana ny vondrona Sanlu. Raha mitendry ny hoe “Sanlu” ianareo, aza mody fanina rehefa mahakasika ny fahasalaman'ny taranatsika ” (三鹿，在小朋友的生命健康面前请不要表演 ) ary alefanareo ny fitadiavana, ny tolakandron'ny 12/9 , I Google dia nanome tarehimarika 11 400 ho valin'ny karoka, raha 11 monja no nomen'ny Baidu. Ny marainan'ny 13/9, i Google nanome tarehimarika 11800 ho valin'ny fitadiavana, raha 54 ny an'ny Baidu, avy eo dia niakatra be tampoka izany.
Soratra miverina: RONONO MAMONO, TANDREMO « GAZETY_ADALADALA
[…] Nadikako ho amin’ny teny Malagasy ilay hafatra voalazako ery ambony raha mba tianao ho hita eto. Ary misy fanampim-baovao koa nalaiko tao amin’ny Yahoo […]
17 Septambra 2008, 14:08